FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA DORKIE - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Dorkie
Alika mifangaro Dachshund / Yorkie mifangaro
Ny Dorkie dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Dachshund ary ny Yorkshire Terrier . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Drafitra mpamorona endrika = Dorkie
Mpanoratra International Canine Registry®= Dorkie Terrier
Barney ilay Doxie / Yorkie mifangaro — mahatsapa fa efa nivoatra i Barney Syndrome kely alika , toy ny ataon'ny ankamaroan'ny alika kely, nanomboka niasa ny tompony naka an'i Barney voditongotra mitarika rehefa mandeha an-tongotra. Rehefa tsapan'i Barney fa tsy tompon'andraikitra intsony izy dia afaka miala sasatra. Tena manahirana ny alika kely toy izany ny tsy maintsy mihazakazaka iray manontolo fonosan'ny olombelona ! Barney dia nanaporofo fa nanaiky kokoa raha vao nampitaina fa tsy tompon'andraikitra intsony izy. Nanaiky an-tsitrapo ny toerana izy ary mila mifanaraka aminy ny tompony mba hialany aminy.
Barney the Doxie / Yorkie mifangaro
'Ity dia SissyGoof Kely. Mpangaro Yorkie / Dachshund 2 taona izy. Izy irery no alika kely avy tamin'ny fako nisy volafotsy. Ny volony dia miova loko arakaraka ny toetrandro. Rehefa manomboka mafana izy amin'ny lohataona dia mivadika miloko ny volony, saingy mitazona ny ankamaroan'ny volafotsy. Izy dia tena matanjaka ary tia milalao. Manana mpiara-milalao aminy izy Mifangaro Lab / Mpiandry Chloe dia valo heny lehibe noho i Sissy ary mahafinaritra ny mahita azy ireo milalao. Tian'i Sissy ny milalao ny kilalao ary mifampiresaka amin'ny olona. '
'Ity i Winston, Dorkie keliko mahafinaritra. Nalaiko ity sariny ity rehefa nilalao tao amin'ny toeram-pambolen'ny ray aman-dreniko izy. Lehilahy kely tena marani-tsaina izy. Mampiasa ny maro amin'ireo teknika fampiofanana an'i Cesar miaraka amin'i Winston izahay, ary tena miasa izy ireo. Afaka mandray azy izao aho mandeha lavitra izany dia mety hanome fanelingelenana be dia be nefa tsy mampiasa tadidy ary mijanona eo akaikiko ihany izy, miandry ny teny momba izay manaraka (mazava ho azy fa any amin'ny toeram-piompiana io, fa tsy eo afovoan-tanàna misy fiara). Fantany ny maro baiko fototra toy ny mipetraka, mandry, mihorona, mijoro, ary na dia mandady aza (mandady eo ambanin'ny zavatra ao an-kibony izy). TIA koa izy milalao fetch. Ary ny tsara indrindra dia ny zazalahy nahaterahana. Hiverina roa izy amin'ny 14 Jona. '
'Ity i Lana Mable, mifangaro any Yorkie / Dachshund 5 taona izy. Tiany ny any ivelany manenjika vorona sy squirrels, ary tiany ny milalao sy mifampitolona amin'i Fred zanako hafa ( Fifangaroan'ny Golden Retriever / Siberian Husky ). Tena manaiky sy be fitiavana izy! '
Eli the Dorkie (Dachshund / Yorkie cross)
'Reno Sir Longfello, zanak'alika kely Dorkie 12 herinandro - ny reniny dia mena midorehitra 8 kilao, Dachshund lava volo ary ny dadany dia Yorkie 7 kilao. Manodidina azy dia antsoina koa hoe Dach-Shire ny 'karazany' azy. Ny kilalao ankafiziny dia ny kilalao saka ..... Voankazo tena ankafiziny, akondro .... Ary ny sakaizany akaiky indrindra eran'izao tontolo izao dia ny 'rahalahiny', Min Pin mena 3 taona antsoina hoe Chance. '
Jereo ohatra misimisy kokoa momba an'i Dorkie
Sarin'i Dorkie 1
amidia amboadia arctic amidy amidy
neapolitan mastiff amerikana bulldog mix
laboratoara mainty mifangaro amin'ny retriever volamena